Général Désiré RAMAKAVELO | GAZETY_ADALADALA
« Ny andron’ny 07 febroary 2009, hotsarain’ny ampitso Ministres du Gouvernement de Transition »
Olonatoaanao, on 10/02/2009 at 7:56 said:
Raha izaho manokana dia efa ela io minisitra io no tokony niala. Efa tokony t@ korontana famaizana fivarotana sy tranon’olona ireny. Inona no ilaina fiarovana raha ireny aza tsy hita izay nafitsony. Asa aloha fa samy manana ny fomba fijeriny. Ny mahagaga ahy dia tsy dia nasian’olona resaka ireo fatin’olona may kila sy voatoto t@ ilay alatsinainy mainty irY? Nefa iza moa no nitarika azy ary tsy nahafehy azy? Dia efa fantatra fa ireto olona tarihina dia mpanararaotra no betsaka dia mbola voizina ihany fa mafy tokoa izany fitiavana seza. Teny kely fotsiny aty dia mety ho may ny fanananao, ampanjakain-dry zareo tokoa ny fahalalan’izany hoe demokrasia. Vava tsyambina dia mety ho raharaha ny ahazo ka aza manome tsiny fa nahorina tsy azo t@ ny seza fa tena hatsemboana.
razanama, on 20/01/2010 at 1:59 said:
Leo tanteraka ny anaovanareo sy hitondranareo mpanao politika vao misondrotra sy ireo efa nanao politika an-taonany maro ny FIRENENA aho satria tena nodisoinareo ny fanantenako ! raha nampanantenaina fiovana ny ho tsaratsara kokoa ny vahoaka dia ny mifanohitra amin’izay no hita eto